Shahaado sharaf - Hebei Chenli Rigging Group Co., Ltd.
Chenli waxay si adag u aaminsantahay in horumarku yahay mabda 'dhammaystiran. Waxaan u qaadanaa suuq ahaan sidii hagitaan, iyadoo xirfadda kor u qaadista faa'iidooyinka tartan, halka faa'iidada xirfadeedka ugu badan ee tooska ahi ay tahay mid ballaaran oo heer sare ah.so Chenli wax dadaal ah kuma bixineyso kobcinta awoodda badeecooyinka iyo hagaajinta tayada badeecada, ku dadaal inaad noqoto soosaaraha shaashadda ugu weyn. gudaha Shiinaha, si ay u iibsadaan sheyga ceyri ee tirada, keydi qiimaha, yaree qiimaha, dhammeystir nidaamka weyn ee macaamiisha si dhakhso leh.
Chenli waxay heshay ISO9001, CE, GS, CCS, shahaadooyin, kuwaas oo aan caan ku ahayn isla warshadaha. Dhanka kale Caymiskayagu PICC wuxuu awoodaa sanad kasta caymiska alaabta ee RMB2000000. Haddii shil kasta oo ay keenaan alaabadayada Chenli, waxaad si toos ah u wici kartaa 95518 shirkadda PICC ayaa xallin doonta dhibaatada waqtiga ugu horreysa. Xaqiiqdu waxay tahay in chenli aysan ilaa iyo hadda helin wax cabasho ah.
Dadaalkeenna iskaashiga ah wuxuu naga dhigaa mid weyn. Chenli waxay la shaqeysaa dad badan oo hibo leh oo aqoon u leh cilmi baarista, maamulka iyo suuqa. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xuquuqda lagama maarmaanka u ah inuu ka bogo kartidooda. Kuwaas oo hubiya in shirkad cilmi baarista lagu sameeyo hal ama laba wax soo saar oo cusub sannad kasta. Hadda Chenli ma aha oo keliya alaabooyinka soo saarka laakiin waxay sidoo kale ka caawisaa macaamiisha inay naqshadeeyaan qorshe iyo caawimaad farsamo.
Markii la aasaasay shirkadda, Chenli waxay ogaatay in kor u qaadida alaabada, nabadgelyadu ay tahay waxa ugu muhiimsan marka la adeegsanayo. alaabta ceeriin, xakameynta wax soo saarka, xiisadda tijaabada. Dhoofinta dhammaan alaabadayada waligood taxadar la'aan.
ISO 9001 SOMALI
rukhsad soo saar
Shirkadaha halbeegga u deggan ee gobolka
Maamuus qandaraas iyo maamuus ballan
Shirkad farsamada gacanta sare
Shirkado aad u fiican oo heer sare ah